5 Jees Jees Balloon | Abuurista khadka tooska ah
5 Mockups Cute Balloon
Fran Marin | | Design Graphic, Photoshop
macnaha guud ee aan fariintayada u dhigno wuxuu ugu dhawyahay sida fariinteena. Waxaa jira warbaahin aan la tirin karin oo aan ku qaban karno naqshadaheena inta badanna warbaahintani waxay naga caawin kartaa inaan kor u qaadno farriintayada ama xitaa aan siino waxyaabo cusub. Tani waa waxa ku dhacaya ilaha aan maanta kuu keenay: Baakad ay kujiraan majaajillo buufin. Template-kaan waxaan ku dhexgalin karnaa astaamaheena ama hal ku dhigyadayada buufinnada oo wadarta dhabta ah. In kasta oo aysan ahayn ilo bilaash ah, waxaan u maleynayaa inay kuxirantahay mashaariicda (sida xayeysiinta ama bogagga shabakadda) inay u qalanto. Gudaha xirmadan shan nooc ayaa lagu daray leh buufinno kala duwan oo ku kala yaal boosas kala duwan iyo midabbo kala duwan (in kasta oo aad hore u ogayd in midabada si fudud looga beddeli karo codsiyada sida Adobe Photoshop). Faylal kasta ayaa kujira Qaabka PSD waxayna ka kooban yihiin walxo caqli badan oo si fudud oo dhakhso leh loogu beddelayo waxyaabaha ku jira buufinnada. Intaas waxaa sii dheer, mid kasta oo ka mid ah sawirradu wuxuu ku jiraa qaraar sare, oo ah qaabka midabka RGB iyo 300 pixels halkii inji oo xal ah (taas oo ah, 3500 pixels 2332 pixels). Sida aad u aragto, tayada qaab-dhismeedyadu aad ayey u wanaagsan yihiin isla markaana isku-dhafka astaanta ayaa gebi ahaanba macquul ah.
Xagee ka heli kartaa jees jeeskaan wanaagsan? Waa hagaag bogga Sawirqaade (Envato) qiimo dhan lix doolar. Xirmooyinkayaga waxaa ka mid ah qalab caawimaad ah oo loogu talagalay kuwa adiga ku cusub ee adeegsanaya aaladaha noocan ah (in kastoo haa, tilmaamahaas waxay ku yimaadaan af Ingiriis laakiin waxaan horeyba kuugu sheegayaa inay aad u fudud tahay).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 5 Mockups Cute Balloon
Way qumman yihiin
Memento Mori ee Etoille Bulle
7 waxyaabo badan oo xiiso leh oo loogu talagalay Prestashop